ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ် ကြည့်နေစဉ် မီးပျက်လို့ဆန္ဒပြကြမှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ် ကြည့်နေစဉ် မီးပျက်လို့ဆန္ဒပြကြမှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ် ကြည့်နေစဉ် မီးပျက်လို့ဆန္ဒပြကြမှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့
Posted by Bayote on Jun 17, 2010 in News, World News |5comments
လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့ က ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယား ဘောလုံးကန်နေစဉ်အတွင်းမှာ မီးပျက်သွားလို့ ဆိုပြီး စိတ်ပျက်ဒေါသူပုန်ထကြတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ဘောလုံးဝါသနာရှင် ရာပေါင်းမြောက်များစွာဟာ လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ညဘက်အချိန် ၂ နာရီကျော်ကျော်တိုင်အောင် လမ်းတွေပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြကြလို့ကားတွေပိတ်ဆို့ ကုန်ပါတယ်။ ဒိမီးပျက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖို့ဂက်စ်ဓါတ်ငွေ့မလုံလောက်လို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒီလို ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တွေ ပြသနေတဲ့နေ့ ရက်တွေမှာ မီးပျက်လို့ ဆိုပြီး ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ အရင်နေ့ ကတည်းက အစပျိုးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မီးပျက်လို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေထဲက ဦးရေ ၃၅ ယောက်လောက်ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူတစုဟာလည်း လျှပ်စစ်ရုံးတစ်ရုံးကို ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး အထွေထွေမန်နေဂျာကို ကြိမ်းမောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့ အတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအနှံ့ မှာလည်း မီးပျက်မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ် မကြည့်ရတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်သူတွေဟာ အစိုးရအဆောက်အဦးတွေကို ခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ပြုတင်းပေါက်တွေ တံခါးတွေကို ရိုက်ချိုးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အဲသလို လုပ်လို့ ရသလား ?
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာတောင် အဲသလို လုပ်လို့ရတယ်လား ……
မီးပျက်တာ ကို ဘင်္ဂါလီ တွေက စိတ်တိုတယ်လား….
တို့ မြန်မာသာကီမျိုးကတော့ စိတ်မတိုရဲပါဘူး… ကြောက်တယ်။
အော် မီးလေးပျက်တာနဲ့ အဲလောက်ဖြစ်ရတယ်လို့ 
မြန်မာပြည်မှာဆို ဒင်းတို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
လူဆိုးတွေ။ ဒီလူတွေကို အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ပြည်နှင့်ဒဏ်ပေးလိုက်။
ဒီကောင်တွေ ငါတို့နိုင်ငံသားတွေလောက် ခန္တီပါရမီ မရှိသေးပါဘူး